Tsvaga AccountKiller, we universal user guide iyo inokubatsira kubvisa recalcitrant maakaunti.
Yakatumirwa ne Tranquillus | Oct 12, 2018 | hofisi
Zuva rimwe nerimwe tinosangana neutsva mabasa anokosha kuhupenyu hwedu hwezuva nezuva, huchava husingashandisi makore mashoma gare gare, uye izvo, uyewo mumunhu wega wega semhizha.
Kunyangwe iri software, kunyorera kana webhusaiti yakapusa, aya masevhisi angangoita ese anoda kusarudzika kuti agadzire account uye dzimwe nguva zvinonetsa kudzima iyi account kana usinga 'handichazvidi!
Kazhinji yenguva, mapurogiramu anotamba padambudziko rekubvisa account kuti uchengetedze ruzivo rako pachako kuitira kuti iwe ugare uchitanga zvakare kuitira kuti udzoke kuzoshandisa mabasa avo kana dzimwe nguva ugovatengesa kune makambani matatu.
Zvechokwadi, vasingazivi nzira yakarurama, dzimwe nguva vachivhiringidza kubvisa compte yako, vazhinji vashandisi vanoda kusiya uye vanosiya ruzivo rwavo kumakambani aya avo vanoramba vachivakuvadza, kuti vapedzisire mu spam mukanakisisa.
Ndicho chikonzero sarudzo yakatanga kupa kukupa iwe, pasina chikonzero chekugadzira kambani, zvose zvine ruzivo rwehuwandu (muchiChirungu) yega yega sangano kuti uzive nzira yekuvhara nhoroondo.
Ichi chishandiso, kana zvirinani, ino webhusaiti inonzi AccountKiller!
AccountKiller inoshanda sei?
AccountKiller.com inongova shanduro inonyora huwandu hweshumiro mumhando dzakasiyana-siyana, iyo inonyanya kuoma kubvisa, kana kuti haina intuitive kana iri kusvika pakuvhara kero.
Iko kune saka akasiyana uye akasiyana masevhisi, senge Facebook, Skype kana Tinder. Kana iwe wakamboedza kuvhara imwe yeakaundi yavo, iwe unonzwisisa kukosha kwekuve negwara rinowanikwa. Unogona kunge usina kubudirira uye wapedzisira wakanda mapfumo pasi. Kana zvirizvo, hazvina kunonoka, neAccountKiller unogona kuwana kutsiva kwako!
VERENGA Word processing software
AccountKiller anosarudza nzvimbo dzakasiyana-siyana nekushanda maererano nekuoma kwavo pakuvhara nhoroondo. Kune 3 mavara (Muchena, Grey, Mutsvuku), chena chaiva chakareruka uye chakaita chakanyanya kuoma.
Kupfuura mutungamiriri, kuwedzerwa kwambiro?
AccountKiller haimire pane yakapusa gwara. Chokwadi, saiti iyi inopa kuwedzera kwayo, kunowanikwa pane akawanda mabhurawuza pamwe neIOS. Uku kuwedzerwa kunowanikwa pasi pezita: AccountKiller SiteCheck.
Kufarira kwechikumbiro ichi hakusi kubvisa maakaiti ako, asi pane kushanda semurindi pamwero wemamiriro ezvinhu ekubvisa account pane rimwe basa.
Kuburikidza neshoko iri, kana iwe uchida kunyoresa pane imwe nzvimbo uye kuti nzvimbo yacho inotsanangurwa mu database yeA AccountKiller (iyo inogonawo kugadziriswa nevashandisi vayo vane mukana wekutumira nzvimbo zvakananga pa www.accountkiller.com ), iyo yekuwedzera inokunyevera nekukupa iwe ruzivo rwese rwaunoda kuti nekukurumidza uye nekunyatso bvisa account yako pazuva raunoda!
Tsvaga AccountKiller, we universal user guide iyo inokubatsira kubvisa recalcitrant maakaunti. August 25th, 2020Tranquillus
pashureBasa reGoogle, kana kuti sei kuziva zvose pamusoro pezviito zvako zvine chokuita neGoogle nemasangano ayo akasiyana-siyana.
zvinoteveraNzira yekuchenesa sei mazamu ehutano mumaminitsi nemaminetsi angu?